Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: M/Kuxigeen Kusheegii Binshangul oo Xabsiga Ladhigay.
Deg Deg: M/Kuxigeen Kusheegii Binshangul oo Xabsiga Ladhigay.
Posted by Dulmane	/ November 25, 2017
War goordhaw naga soo gaadhay Gobolka Binshangul ayaa sheegaya in ciidanka wayaanuhu ay gacanta kusoo dhigeen madaxwayne kuxigeenkii waxa loogu yeedho maamulka maqaarsaarka ah ee Binshangul.
Sida xogta aan kuhelayno madaxwayne kuxigeen kusheegii Gobolka Binshangul Misgana Admasu oo kabiyo diiday dhaqanka xun ee kooxda TPLF iyo sida ay wax usocdaan ayaa lasheegayaa in uu ubaxsaday dhulka miyiga ah ee Gobolka Binshangul.
Warka ayaa intaas kudaraya in ciidanka wayaanaha oo kawar helay qorshaha uu Misgana Admasu damacsan yahay ayaa sooqabtay waxayna udhaadhiciyeen jeelka isagoo aad u jidh dilan, sidoo kale ciidanka gumaysiga ayaa soo qabtay dhowr kamid ah ciidankii ilaalada u ahaa ninka baxsaday.
Misgana Admasu ayaa lasheegayaa in uu aad uga soo horjeedsaday qorshayaal shacabka ree Binshangul kadhan ah oo ay wadaan horjoogaha Gobolka iyo kooxda TPLF, waxaana lasheegayaa in uu go’aansaday in uu ugalo jabhadaha hubaysan ee Gobolka kadagaalama.
Ninkan oo siwayn looga yaqaanay Gobolka Binshangul ayaa lasheegayaa in uu mar ahaa Safiir, wuxuuna wadanka dib ugu soolaabtay kadib markii uu isu arkay in uu wax kabadali karo dhibaatooyinka haysta dadka ree Binshangul.
Dadwaynaha ree Binshangul oo aad uga xumaaday sida loobahdilay siyaasigan ayaa shucuurtooda siwayn u muujiyay, waxaana laga cabsi qabaa in ay dadwaynuhu dhigaa kacdoono waawayn oo ay kudiidan yihiin taliska wayaanaha.